နောက်ဆုံး (သို့မဟုတ်) အစ | Mg Ogga's Notes
နောက်ဆုံး (သို့မဟုတ်) အစ
ဒါနောက်ဆုံးတဲ့ ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပျောက်ဆုံး
ချစ်ခင်တဲ့ ဘ၀ ၊ လှပတဲ့ သံယောဇဉ်
ဝေးလွင့်ကွယ်ပျောက်တော့ မဲ့ နောက်ဆုံးတဲ့လား……။
တမာတွေစိမ်း၊ သစ်ပင်တွေ ယိမ်းက
ပကာသနမရှိ ၊ သဘာဝအတိ
ရိုးသားတဲ့အလှ ၊ ပြည်ဝတဲ့ ၀န်းကျင်
လူမျိုးစုံလင် ၊ ခင်မင်ပေါင်းစည်း
ကျောင်းတော်ကြီးမှာ ငါတို့ပျော်ရွှင်ခဲ့ ပြီလေ။
၊ ပြည်ဝတဲ့ ၀န်းကျင်
Super Cub ဆီး တွေ့သမျှသူ နှုတ်ဆက်
ဘယ်တော့မှမငြီးတဲ့ ကျောင်းသွားတဲ့ ခရီးလေ။
ပွင့်လင်းခံစားကြ တမ်းတခြင်းများရဲ့ သုံးနှစ်တာ ကာလ
ဒါ နောက် ဆုံး တဲ့ လား။
အညာမှာ ပြန်ဝေရင် ဒီတစ်ခါ ပြန်ကြွေရင်
နွမ်းရိရိ နှလုံးသားနဲ့ ငါပြုံးထားမယ်။
Wake up !! our Economists
တို့တစ်တွေ့ မတွေကြ အစဉ်မတွေ့ရတာမှမဟုတ်တာ
တို့တစ်တွေ လမ်းခွဲ အစဉ်ကွဲတာမှမဟုတ်တာ
နောင်တစ်ချိန်ပြန်ဆုံစရာ ဒီကမ္ဘာဟာ ကျဉ်းကျဉ်းလေးပါ
လူငယ်ဘ၀ အဆုံး ဒါ နိဂုံးပေါ့……..။
နေရောင်အောက်မှာ စေတနာတွေ အရောင်တောက်လို့
ဘောဂဗေဒ နဲ့ ပြည်သူတွေ သောကကို ဝေငုဖို့
တို့တွေရဲ့ ရင့်ကျတ်တဲ့ အလှ ရိုးသားတဲ့ ဘ၀တွေ နဲ့
ကြိုးစားကြဖို့ ဒါ ခြေလှမ်းအစပေါ့……………..။
P.s:မြန်မာပြည်က ပညာရေးကောင်းမကောင်းတော့ မဝေဖန်တတ်ပါ သို့သော်ကျွန်တော် ကျောင်း ၃ နှစ် တတ်ခဲ့တဲ့ အတွင်း ကျောင်းသားအရသာဆိုတာကို ခံစားရပါတယ် ပျော်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းတတ် တုန်းက ကျွန်တော်တို့ ကို ကျောင်းစာဆိုတာ တတ် ခေါင်းဆောင်မှုပညာ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု တွေကို မသိလိုက်ပဲ(Informal Learning) သင်ယူမိတာတော့ သေချာပါတယ်။ ဒီကျောင်းသား ဘ၀ကို ဘာပဲ ပြောပြော ပြန်တမ်းတ မိပါတယ် ဆိုတာ ၀န်ခံပါတယ်။ တခြား မပြောလိုပါ။
မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၊ ၂၀၀၆-၀၇ နှစ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခံရဖူးတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ပထမဆုံး ပုံနိုပ်ခံရတဲ့ ကဗျာ စာမှုလေးပါ အဲဒီတုန်းက နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းပြီးတော့မယ် ဆိုတဲ့အသိနဲ့ ၀မ်းနည်းစိတ်နဲ့ ရေးခဲ့တာပါ အခုပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ မုံရွာကို လွမ်းတယ် ကျောင်းသားဘ၀ ကို လွမ်းတယ် သူငယ်ချင်းတွေ ကို လွမ်းတယ် ဒီကဗျာကို သူငယ်ချင်းနဲ့ ဆရာဆရာမ အတော်များများ က ကြိုက်ရတယ်။ အခုအတိ ဒီကဗျာကို ကျွန်တော်ကြိုက်တုန်းပဲ နောက် ဒီကဗျာဟာ ရေးဖူးသမျှထဲ အရှည်ဆုံးလို့ ပြောလို့ ရတယ်။ ဒီထက်ရှည်တဲ့ တခြားကဗျာ တစ်ပုဒ်ပဲရေးဖူးတယ် မေ့လိုက်ပြီ အဲဒိကဗျာကိုလေ။……………………………
July 1, 2010 in ကဗျာ. Tags: monywa
← Non-violent Communications(NVC) 2
ပုံပြောတဲ့ ဓလေ့မရှိတော့ရင် →